Git Sangit News » महिलाले आफ्ना जीवनसाथीबाट कस्तो से,क्स’ व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् ? जानिराखौ,
दम्पतीको हकमा यौन एक अनिवार्य र नियमित आवश्यक्ता हुन् जबकी दम्पतीबीचको सम्बन्धमा यौ’नको खास भूमिका रहन्छ । जब यौन जीवन आनन्ददायक हुँदैन, दम्पतीबीच भित्र भित्रै असन्तोष पैदा हुन्छ । यसले विवाहेत्तर सम्बन्धको जोखिम समेत बढाउँछ । दम्पतीको यौन जीवन जति–जति खल्लो र अरुचीकर हुँदै जान्छ, त्यसले आपसमा अविश्वास, आशंका र असमझदारी समेत बढाइदिन्छ ।
कसरी यौ’न जीवनलाई आनन्ददायक बनाउने ? जीवनसाथीले कस्तो यौ’न व्यवहार रुचाउँछन् ? यौ’नमा चरमोत्कर्ष कसरी प्राप्त हुन्छ ? यौ’न क्रियाअघि र पछि के कस्ता व्यवहार आवश्यक वा उचित हुन्छ ? यस विषयमा सदियौंदेखि वहस र खोज हुँदै आएको छ । हाम्रा पूर्वजहरुले समेत यौ’न–जीवनको महत्वलाई बुझेर यसलाई थप रोमाञ्चक, व्यवस्थित र संयमित बनाउने विधीहरु पहिल्याएका छन् ।
यद्यपि अहिले पनि यौ’नका अनेक आयमलाई लिएर सोधीखोजी एवं खोज भइरहेका छन् । जस्तो केही समयअघि एक सर्वेक्षण भएको थियो, खासगरी महिलाहरुको यौ’न रुचीलाई लिएर । यौन सम्बन्धका क्रममा महिलाहरुले आफ्ना जीवनसाथीबाट कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्छन् ? उनीहरुलाई के कुराले उत्तेजित बनाउँछ ? यौ’नमा उनीहरु कसरी आनन्दित हुन्छन् ?
एक डेटिङ साइटले गरेको उक्त सर्वेक्षणबाट के थाहा भएको छ भने यौ’नलाई लिएर महिलाहरुको रुची परिवर्तन भइरहेका छन् । सहभागी ६२ प्रतिशत महिलाले ‘सफ्ट ’ भन्दा ‘रफ से’क्स’ रुचाउने खुलासा गरे । उनीहरुलाई परम्परागत ढर्राको यौन क्रिया त्यती रुचीकर लाग्दैन । यौ’नका क्रममा उनीहरु नयाँ नयाँ आसन भोग एवं अभ्यास गर्न चाहन्छन् ।
प्रकाशित मिति ७ भाद्र २०७७, आईतवार २१:२५